Android မွာ Private Browsing ကို ဘယ္လို သံုးမလဲ ? - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)
Home > နည္းလမ္းမ်ား > Android မွာ Private Browsing ကို ဘယ္လို သံုးမလဲ ?
Android မွာ Private Browsing ကို ဘယ္လို သံုးမလဲ ?
ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) 4:29 AM Android Tutorial, နည္းလမ္းမ်ား
Android မှာ Private Browsing ကို ဘယ်လို သုံးမလဲ ?
Android မှာ Private Browsing ကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် သင်ကြည့်ခဲ့တဲ့ ဝက်ဆိုက်များ၊ ရှာဖွေခဲ့မှုများ စတဲ့ ခြေရာလက်ရာများကို အခြားလူများ မသိနိုင်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် သင် ဝက်ဆိုက်များမှာ Login ဝင်ခဲ့တဲ့ Username, Password များကို ဒီစွမ်းဆောင်ချက်က ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Mobile Banking , Internet Banking တို့လို ငွေကြေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဝက်ဆိုက်များကို အသုံးပြုတဲ့ အခါမှာ ပိုလို့တောင် အသုံးဝင်ပါတယ်။
Android မှာ Private Browsing ကို အသုံးပြုနည်း
Incognito Mode လို့လည်း ခေါ်တဲ့ Private Browsing Mode ကို Android မှာ အသုံးပြုရတာ လွယ်ကူပါတယ်။ ဘရောက်စာများစွာမှာ အဲဒီ စွမ်းဆောင်ချက် ပါရှိပြီး အသုံးပြုနည်း အနည်းငယ် ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ ဒီ Tutorial မှာတော့ Chrome Browser ဖြင့် အသုံးပြုနည်းကို ပြသထားပါတယ်။
• Chrome ကို ဖွင့်ပြီး ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှ အစက် သုံးစက်ကို နှိပ်ပါ။ New incognito tab ကို နှိပ်ပါ။ နှစ်သက်သလောက် Incognito Tab များကို တစ်ပြိုင်နက် ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ လုံခြုံစိတ်ချစွာ အင်တာနက် သုံးနိုင်ပါပြီ။
• Incognito Tab များကို ပိတ်ဖို့အတွက် ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှ စတုရန်းပုံ ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ Incognito Tabs များကို ပိတ်ပါ။ သို့မဟုတ် အစက်သုံးစက်ကို နှိပ်ပြီး Close incognito tabs ကို နှိပ်ရင် အားလုံးကို တစ်ပြိုင်နက် ပိတ်ပေးမှာပါ။ သင့်ရဲ့ ဖုန်းကို အခြားလူများ ယူမကြည့်ခင် Incognito tabs များကို ပိတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
သင့်ဖုန်းမှာ နဂိုပါတဲ့ ဘရောက်စာများမှာလည်း Private Browsing ပါနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် Samsung Galaxy S7 Edge မှ ဘရောက်စာမှ Secret Mode လိုမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
Private Browsing ကို သုံးသင့်တဲ့ အချက်များ
အကောင့်များကို Login ဝင်ခြင်း
သင့်ကိုယ်ပိုင် ကွန်ပြူတာများရဲ့ ဘရောက်စာများမှာ သင့်ရဲ့ Password များကို သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြင့် Login ဝင်တဲ့ အခါမှာ မြန်ဆန်စေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စမတ်ဖုန်းများမှာ ဒီလို သိမ်းဆည်းထားရင် ပြဿနာ ရှိနိုင်ပါတယ်။သင့်ရဲ့ စမတ်ဖုန်းကို သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေများကလည်း ယူကိုင်လေ့ရှိကြမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်ရဲ့ ဒေတာများဟာ မလုံခြုံပါဘူး။ ကံမကောင်းလို့ ဖုန်းပျောက်တဲ့ အဖြစ်မျိုးတောင် ကြုံရင် သင့်ရဲ့ ငွေကြေးများ ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်။
စမတ်ဖုန်းများမှာ Private Browsing ကို သုံးခြင်းဖြင့် Incognito Tab ကို ပိတ်လိုက်တာနဲ့ သင့်ရဲ့ Log-In ဒေတာများကို ဖျက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် သင့်ရဲ့ အရေးကြီး ဒေတာများကို လုံခြုံစေပါတယ်။ အခြားလူများရဲ့ ဖုန်းမှာ သင့်အကောင့်ကို Login ဝင်တဲ့ အခါမှာလည်း Private Browsing ကို သုံးသင့်ပါတယ်။
ကြော်ညာများရဲ့ ပစ်မှတ်ကို ရှောင်လွှားနိုင်ခြင်း
Private Browsing က ကြော်ညာများ ပြသခြင်းကို မကာကွယ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့ကိုသုံးရင် Google လို ကုမ္ပဏီမျိုးက သင့်ရဲ့ အင်တာနက် အသုံးပြုမှုကို ခြေရာခံလို့ မရပါဘူး။ Google က သင်နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် ကြော်ညာများကို ပြသဖို့အတွက် အင်တာနက်မှာ သင့်ကို အမြဲတမ်း ခြေရာခံနေပါတယ်။ ဒီလို ခြေရာခံခြင်းကို ကာကွယ်ဖို့ Private Browsing ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
အကောင့်များစွာကို တစ်ပြိုင်နက် အသုံးပြုခြင်း
သင့်မှာ Google အကောင့် ၂ ခု ရှိရင် တစ်ခုကို သာမာန် Tab ကနေ အသုံးပြုပြီး အခြားတစ်ခုကို Incognito Tab ကနေ သုံးနိုင်ပါတယ်။
လုံခြုံစွာ ရှာဖွေမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း
အင်တာနက်မှာ အခြားလူများ မသိစေချင်တဲ့ ရှာဖွေမှုများ ပြုလုပ်ချင်ရင်လည်း ဒီစွမ်းဆောင်ချက်က အသုံးဝင်ပါတယ်။ အခြားလူများရဲ့ ဖုန်းကို အသုံးပြုတဲ့ အခါမှာလည်း သူ့ကို သုံးသင့်ပါတယ်။ သုံးပြီးရင်တော့ Incognito Tab များကို ပိတ်ဖို့ သတိထားပါ။
Android မွာ Private Browsing ကို ဘယ္လို သံုးမလဲ ? Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 4:29 AM Rating:5Android မွာ Private Browsing ကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ သင္ၾကည့္ခဲ့တဲ့ ၀က္ဆို္က္မ်ား၊ ရွာေဖြခဲ့မႈမ်ား စတဲ့ ေျခရာလက္ရာမ်ားကို အျခားလူမ်ား ...
ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) at 4:29 AM